Waqti dheer oo ku wareegsan waqtiga baaritaanka PCR iyo qalabkiisa culus iyo culus ayaa ahaa qodobbada muhiimka ah ee xaddidaya faafitaanka habkan ogaanshaha aadka u xasaasiga ah ee xasaasiga ah ee codsiyada lagu ogaanayo daryeelka.
UF-300 Nidaamka PCR-waqtiga dhabta ah
Nidaam Degdeg ah, Iswaafaqsan oo Dareen leh oo loogu talagalay Xannaanaynta Cudurka Molecular
Reaction Dareen-celinta ku saleysan jaan-goynta ku dhisan sheyga ayaa bixisa wax soo saar degdeg ah- "40 Wareegood oo 20 daqiiqo ah".
Interface Isdhexgalka isticmaalaha ee dareenka (LCD touch panel) wuxuu ka dhigayaa imtixaanka mid fudud oo fudud.
Foot Raad-yar oo ka mid ah mareegta ayaa ka dhigaysa mid ku habboon codsiyada tijaabada ah ee daryeelka.
◦ Hawlgalka DC-ga oo leh koronto yar (Hawlgalka bateriga waa suurtagal.)
Accuracy Hagaajinta saxnaanta heerkulka iyo isku mid ahaanta si loo buuxiyo shuruudaha lagu ogaanayo cudurka.
Model Moodalka leh kanaalka lagu ogaado (FAM / ROX) oo la heli karo.
Barxad cusub oo casriyeyn ah si aad dhaqso ugu ogaatid baaritaankaaga PCR
Waqti dheer oo ku wareegsan waqtiga baaritaanka PCR iyo qalabkiisa culus iyo culus ayaa ahaa qodobbada muhiimka ah ee xaddidaya faafitaanka habkan ogaanshaha iyo xasaasiga ah ee xasaasiga ah ee codsiyada lagu ogaanayo daryeelka. Genesystem wuxuu ikhtiraacay habka loo yaqaan 'microfluidic chip' ee ku saleysan habka PCR ee laxiriira istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo casri ah taasoo si weyn u yareyneysa TAT-ga baaritaanka PCR ee ka hooseeya 20 daqiiqo. Mashruucyada 'GENECHECKER®' waxay qaateen cinwaan polymer (Rapi: chip ™) kaas oo awood u siinaya xitaa dhakhso badan
daaweynta kuleylka ah ee tijaabooyinka ku jira marka loo eego kiiska isticmaalka tubooyinka PCR ee qalabka PCR-ga caadiga ah. Farsamaynta baaskiilka kuleylka ee GENECHECKERves wuxuu gaarayaa heerka 8 ° C / sec ee kuleylka iyo qaboojinta labadaba. Qaabka tijaabada ah ee gaarka ah iyo tikniyoolajiyad casri ah ee qalabka GENECHECKER® ayaa ka dhigeysa tijaabooyinka PCR ka dhaqso badan sidii hore.
Isku-xirka taabashada isticmaale ee isku-dhafan ee isku-dhafan ee kontaroolada dareenka ah
GENECHECKER® UF-300 nidaamka waqtiga dhabta ah ee PCR wuxuu leeyahay taabashada iskudhafka dusha sare si markaa dadka isticmaala ay si hufan u dejin karaan xuduudaha isla markaana ay isla markiiba u wadi karaan imtixaanada. Gudigaan cabirkiisu yahay 8 inch wuxuu ka kooban yahay shaashadda TFT si loo bixiyo aragti ifaya iyo jawaab deg deg ah.
Waxqabadka qalabka ee la hagaajiyay ee loogu talagalay codsiga ogaanshaha cudurka
In kasta oo ay sii wadato waxqabadkeeda gaarka ah ee fal-celinta degdegga ah, GENECHECKER® UF-300 nidaamka waqtiga dhabta ah ee PCR wuxuu bixiyaa saxsanaanta heerkulka iyo isku mid ahaanta marka la barbardhigo noocyadii hore ee nidaamka GENECHECKER®. Ku darista qaabka leh kanaalka kaliya ee ogaanshaha (FAM), midka leh kan lagu ogaado kanaalka (FAM / ROX) ayaa sidoo kale loo heli karaa codsiyada dalbanaya in lagu maamulo kontaroolada gudaha ah.
Farsamada Howlgalka Xakamaynta saxda ah ee curiyaha peltier
Sugnaanshaha Heerkulka 0.2 ° C
Heerkulka Nooca 0.2 ° C (sifiican ilaa fiican)
Degganaanshaha heerkulka 8 ° C / ilbiriqsi
Heerka Raaxada 8 ° C / ilbiriqsi
Range Heerkulka Dejinta 1 ~ 99 ° C (0.1 ° C xalka)
Qaabka Tusaalaha Polymer ku salaysan 3-cabbir microfluidic
Tirada Muunad Halkii Orod 10
Volume falcelin 10μl
Habka Ogaanshaha Cabbiraadda astaamaha nal-nacayb iyadoo la adeegsanayo moduleka 'CMOS module'
Muujinta iyo Isdhaxgalka Isticmaalaha 7 inch TFT wuxuu soo bandhigaa guddi taabasho karti leh
Nooca Farxada Iftiin sare
Channel Ogaanshaha FAM (hal nooc oo ah kanaal), FAM / ROX (nooca kanaalka laba)
Dhererka Mowjadda hawada (FAM) 472nm + 10nm / (ROX) 575nm + 10nm
Awood AC 110-230V (50-60Hz) Soo-galinta / Soosaarka DC 12V
Isku xirayaasha Nooca USB B (2 dekedood)
Cabbir 218 (w) x 200 (d) x 142 (h) mm
Miisaanka 3.3 kiilo
Bisad Tirada Sharaxaad
1199100600 1199100601 9699100100 9699100101 9699100102 9900300701 GENECHECKER® UF-300 Nidaamka PCR-waqtiga-dhabta ah ee wata Khadka Ogaanshaha Keliya GENECHECKER® UF-300 Nidaamka PCR-waqtiga dhabta ah ee leh kanaallada lagu ogaado laba-geesoodka Rapi: chip ™ 10-sidoo kale PCR Chip (S-Pack), Xirmada caadiga ah (48 kumbiyuutar / PK) Rapi: chip ™ 10-sidoo kale PCR Chip (M-Pack), Xidhmada Dhexdhexaad - 8 PK ee Xirmada Heerka Rapi: chip ™ 10-sidoo kale PCR Chip (L-Pack), Baakad Weyn - 16 PK oo ah Heerka Xidhmada Fiilo Ikhtiyaar Ikhtiyaar u leh Korantada Sigaarka Baabuurka
Website: www.chkbio.cn E-mailka: admin@chkbio.com
Hore: Qaabka UF-150 Nidaamka PCR-waqtiga dhabta ah ee Ultra-Fast
Xiga: CHK-16A Nidaamka Soo saarida Acid Nucleic otomaatig ah